ဆူဒန်တွင် စစ်ဦးစီးချုပ် နှင့် ရာထူးဖယ်ရှားခံ ဝန်ကြီးချုပ် အကြား နိုင်ငံရေး ကြေညာချက် လက်မှတ်ရေးထိုး ၊ ဝန်ကြီးချုပ်ကို မူလရာထူးပြန်အပ်နှင်း - Xinhua News Agency
ဆူဒန်တွင် စစ်ဦးစီးချုပ် နှင့် ရာထူးဖယ်ရှားခံ ဝန်ကြီးချုပ် အကြား နိုင်ငံရေး ကြေညာချက် လက်မှတ်ရေးထိုး ၊ ဝန်ကြီးချုပ်ကို မူလရာထူးပြန်အပ်နှင်း
Africa & Middle East World မြန်မာ-ENG
ဆီးရီးယား အိုလံပစ် ကော်မတီက "အမေရိကန်၏ ခြိမ်းခြောက်မှု" ကို ဆန့်ကျင်သောအားဖြင့် တရုတ်နှင့် တညီတညွတ်တည်းရှိကြောင်း ကြေညာ
Africa & Middle East World မြန်မာ-中文
Africa & Middle East မြန်မာ-ENG
Africa & Middle East မြန်မာ-中文
နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင် ဆူဒန်နိုင်ငံစစ်ဦးစီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံရေးကြေညာစာတမ်းလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက် အမှာစကားပြောကြားနေသော ရာထူးမှဖယ်ရှားခံရသည့် ဆူဒန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် Abdalla Hamdok အားတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ခါတွန် ၊ နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ဆူဒန်နိုင်ငံတွင် တစ်လနီးပါးကြာ နိုင်ငံရေးအကြပ်အတည်းတစ်ခု ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရပြီးနောက် ဆူဒန်နိုင်ငံစစ်တပ်၏ စစ်ဦးစီးချုပ် Abdel Fattah Al-Burhan နှင့် ရာထူးမှ ဖယ်ရှားခြင်းခံရသော ဝန်ကြီးချုပ် Abdalla Hamdok တို့သည် နိုင်ငံရေး သဘောတူညီမှုကြေညာချက် တစ်ခုကို နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး ယင်းကြေညာချက်ထဲတွင် Abdalla Hamdok အား ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ရာထူးပြန်လည် အပ်နှင်းသွားရန်လည်း ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
ဆူဒန်နိုင်ငံစစ်ဦးစီးချုပ် Abdel Fattah Al-Burhan နှင့် ရာထူးမှ ဖယ်ရှားခံ ဝန်ကြီးချုပ် Abdalla Hamdok တို့ နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက် က နိုင်ငံရေးကြေညာစာတမ်းလက်မှတ်နေရးထိုးပြီးနောက် စုပေါင်းအမှတ်တရ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဆူဒန်နိုင်ငံသည် အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်တွင် အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ကောင်စီ နှင့် အစိုးရအဖွဲ့အား ဖျက်သိမ်းကြောင်း နှင့် နိုင်ငံတော်အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာကြောင်း စစ်ဦးစီးချုပ် Al-Burhan က ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့ပြီးနောက်တွင် နိုင်ငံရေးအကြပ်အတည်းတစ်ခုဖြင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။
နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်တွင် စစ်ဦးစီးချုပ် Al-Burhan က အသွင်ကူးပြောင်းရေးအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ကောင်စီတစ်ခု ဖွဲ့စည်းရန် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အမိန့်ဒီဂရီတစ်ရပ်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး သူ့ကိုသူ ကောင်စီ ဥက္ကဌ အဖြစ် အမည်စာရင်းတင်သွင်းခဲ့သည်။
ထိုအချိန်မှစတင်ကာ မြို့တော် ခါတွန် နှင့် အခြားမြို့ကြီးများတွင် စစ်ဦးစီးချုပ်၏ လုပ်ရပ်များအပေါ် ကန့်ကွက်သည့် လူထုဆန္ဒပြပွဲများ အကြီးအကျယ် ဖြစ်ပွားခဲ့ရသည်။
အဆိုပါ နိုင်ငံရေးကြေညာချက်သည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြဌာန်းချက်ဖြစ်ကာ ရာထူးမှ ပြုတ်ကျသွားပြီဖြစ်သည့် ယခင် သမ္မတ Omar al-Bashir ၏ အမျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီအား ဖျက်သိမ်းရန်မှလွဲ၍ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလအတွက် အဓိက ကိုးကားရန် ဥပဒေပြဌာန်းချက်ဖြစ်သည်။
ယင်းကြေညာချက်ထဲတွင် အရပ်သား နှင့် စစ်တပ် သက်ဆိုင်သူများအကြား မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးကို ထပ်လောင်းအတည်ပြုထားပြီး ဆူဒန်နိုင်ငံ၏ တည်ငြိမ်ရေး နှင့် လုံခြုံရေး ကို အာမခံထားကြောင်း ၊ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ကောင်စီအနေဖြင့် အစိုးရ၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ဝင်ရောက်နှောက်ယှက်ခြင်းမပြုဘဲ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလအား စောင့်ကြပ်ထိန်းကြောင်းပေးသွားရန် ဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။
ယင်းနိုင်ငံရေးကြေညာချက်ထဲတွင် မကြာသေးခင်ကဖြစ်ပွားသော ဆန္ဒပြပွဲများအတွင်း အရပ်သားများ နှင့် စစ်သားများ ထိခိုက်သေဆုံးဒဏ်ရာရခဲ့ခြင်းအပေါ် စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် ကတိကဝတ်ပြုခဲ့ပြီး ဥပဒေပြုရေးကောင်စီ နှင့် တရားစီရင်ရေးကဏ္ဍ အပါအဝင် အသွင်ကူးပြောင်းရေး ယန္တရားများကို အပြည့်အဝ ဖော်ဆောင်သွားရန်လည်း ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည်။
၁၉၈၉ ခုနှစ်ကတည်းက ရှိခဲ့သည့် al-Bashir အစိုးရ အုပ်ချုပ်မှု ဖျက်သိမ်းရေး ကော်မတီကို လုပ်ငန်းပြန်လည်အသက်သွင်းရန် နှင့် ၎င်း၏ အစောပိုင်းကာလလုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ် ပြန်လည်သုံးသပ်မှုပြုလုပ်သွားရန်လည်း ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြပါရှိသည်။
ထို့ပြင် ကြေညာချက်တွင် ဖမ်းဆီးထားသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကို ပြန်လွှတ်ပေးရန် နှင့် စည်းလုံးညီညွတ်သည့် အမျိုးသားစစ်တပ်တစ်ခု ဖွဲ့စည်းတပ်ဆောက်ရန်လည်း အခိုင်အမာကတိပြုထားသည်။ အဆိုပါ သဘောတူကြေညာချက်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကို ဆူဒန်နိုင်ငံပိုင် ရုပ်သံမှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပြီး ဝန်ကြီးချုပ် Hamdok က အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ကြေညာချက်အား လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ခြင်းသည် အသွင်ကူးပြောင်းရေး ကိစ္စရပ်အားလုံးကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်တံခါးဖွင့်လှစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။
“ နိုင်ငံရေး စစ်မှန်တဲ့အခြေအနေမှာ သိပ်ကိုကြီးမားတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရပါတယ် ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ဟာ အတူတကွ အလုပ်လုပ်ကြဖို့ စွမ်းဆောင်ရည်ရှိကြပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ယင်းကြေညာချက်ထဲတွင် ပြီးခဲ့သော နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်း ရရှိခဲ့သည့် အောင်မြင်မှုအသီးအပွင့်များကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားရန် အခွင့်အလမ်းကို သဘောတူညီခဲ့ကြပြီး အသွင်ကူးပြောင်းရေးကို အခြေခံသည့် အရပ်သားဒီမိုကရေစီအသွင်းကူးပြောင်းရေး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်တွန်းအားပေးသွားရန်လည်း ဝန်ကြီးချုပ်က ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
“ သဘောတူညီချက်တစ်ခုထဲမှာ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလအတွက် စစ်မှန်တဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ်တွေကိုချမှတ်ပေးဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ” ဟု စစ်ဦးစီးချုပ် Al-Burhan က ကြေညာချက်တွင် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
စစ်တပ်အနေဖြင့် ဆူဒန်နိုင်ငံတွင် မည်သည့်နိုင်ငံရေးပါတီကိုမျှ ဖျက်သိမ်းသွားရန် မရည်ရွယ်ကြောင်း ၊ အသွင်ကူးပြောင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် ပြည့်ပြည့်ဝဝဖြစ်စေရေး လုပ်ဆောင်သွားရန် နှင့် လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပနိုင်ရန် ကတိကဝတ်ပြုကြောင်း ၎င်းက မှတ်ချက်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပြီ ၁၁ ရက်က al-Bashir အစိုးရအဖွဲ့ပြုတ်ကျသွားပြီးနောက် ဆူဒန်နိုင်ငံတွင် အရပ်သား နှင့် စစ်သားများ ပါဝင်သော အသွင်ကူးပြောင်းရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့တစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
KHARTOUM, Nov. 21 (Xinhua) — Nearlyamonth afterapolitical crisis erupted in Sudan, General Commander of the Sudanese Armed Forces Abdel Fattah Al-Burhan and removed Prime Minister Abdalla Hamdok signed on Sundayapolitical declaration, which included reappointing Hamdok as prime minister.
The declaration reiterated that the partnership between the civilian and military components is the guarantor of Sudan’s stability and security, assigning the Sovereign Council to the task of supervising the transitional period without interfering in the executive work of the government.
According to the declaration, the committee for dismantling al-Bashir’s regime since 1989 will be brought back to work and its performance in the previous period will be reviewed. It also promised to release all political detainees and work to buildaunified national army.
At the signing ceremony of the declaration aired live by Sudan’s official TV, Hamdok said the signing of the declaration opens the door wide on all issues of the transition.
“There are great challenges facing the political reality, but we have the ability to work together,” he said.
Al-Burhan, for his part, said the declaration “lays the correct foundations for the transitional period inaconsensual manner.”
1-Photo taken on Nov. 21, 2021 shows the signing ceremony ofapolitical declaration between General Commander of the Sudanese Armed Forces Abdel Fattah Al-Burhan and removed Prime Minister Abdalla Hamdok in Khartoum, Sudan. (Xinhua/Mohamed Khidir)
2- Abdalla Hamdok speaks after signingapolitical declaration with General Commander of the Sudanese Armed Forces Abdel Fattah Al-Burhan in Khartoum, Sudan, on Nov. 21, 2021. (Xinhua/Mohamed Khidir)
တရုတ်-လာအို ရထားလမ်း၏ လာအိုနိုင်ငံအပိုင်း ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုသတင်းအချက်အလက်စနစ် စမ်းသပ်မှု ပြီးမြောက်